Fenjana feno fantsom-baravarana varahina mitambatra fantsona fampifangaroana fantsom-pifandraisana mitambatra mampiasa ny DW-UHF-10 kW fanodinana fametrahana brazing sy rafitra coil fiasana azo ampiasaina
Hery: 9.58 kW
DW-UHF-10kw rafitra fanetren-tena
• Fantsom-borona - Fantsona mpanefy
Hery: 8.83 kW
Silo: eo ho eo ny 1300 ° F (704 ° C)
Fotoana: 2 sec
Ny fivoriambe fantsom-batana kely (fantsom-batana kely) dia natambatra ary nisy peratra avy amin'ny allie fantsom-bolaka nomena (nivarotra volafotsy) ary nametraka teo an-tampon'ilay fantsona roa. Ny hafanana naharitra 2 segondra dia ampy handoto ilay alloy ary hamita ilay tonon-taolana.
Araka ny aseho, ny rafi-pandotoana indostrian'ny DW-UHF-10kw dia mahavita miteraka hafanana amin'ny fantsona lehibe sy kely indrindra amin'ny fantsona mba hameno ilay fiombon-kibo. Ny vanin-taona mafana amin'ny alàlan'ny coil fitsapana azo ampiasaina dia ao anatin'ny andrasana hafanana amin'ny famokarana takian'ny FLDWX
HLQ dia mitaky fivoriambe feno ho dinihina mba hamolavolana ny famaranana kofehy fanasitranana fanindronana izay afaka mametraka ireo tonon-taolana 12 aseho ao amin'ny sarina fandaharana ataonao. Ilaina ny mahafantatra sy mahita ny fanadiovana eo anelanelan'ny fantsom-bavony ho brazed sy ny fizarana vy sivana mba hahazoana antoka fa tsy voan'ny fiompiana vy ny vokatra vokarin'ny RF izay noforonina tao amin'ny vaelin'ny entana. Ity endrika famolavolana farany ity dia mety mitaky ny fametrahana fitaovana ferrite ao anaty vainafo izay miasa mba hifantohana ny saha RF mankany amin'ny làlana varahina fa tsy amin'ny trano vy.
Ny fanombohana voalohany dia vita tamin'ny DW-UHF-10 kW izay mampiasa kozera misy azo ampiasaina. Ny vina famonoana induction famokarana dia ho ao anaty trano tsy misy fitondran-tena izay mamela ny mpandraharaha hampiasa azy io hamantarana ny coil manohitra ny varahina mitarika ho amin'ny toerana fanaovam-panaovana tsara sy mahomby ho an'ny fizotran'ny brise. Ny famolavola coil famokarana dia hampiditra ireo làlana fohy kokoa noho ny coil fitsapana ary hamboarina ho toy izany ny fanatsarana ny fihodin'ny hafanana (fotoana mafana kokoa).
HLQ dia afaka manome ny rafitra misy fanaraha-maso ny dingana fanaraha-maso. Izy io dia ho toy ny tsingerin'ny fizotran'ny programa izay novolavolaina ho an'ny fiaraha-mientana rehetra voatanisa ao amin'ny sarin'ny fivoriambe nomen'ny fangatahana avy amin'ny FLDWX. Ny tsirairay amin'ireo 12 fantsona dia ho voalamina isan-karazany mba handraisana ny fiarahany tsirairay - izany dia mamela ny mpandraharaha hifindra amin'ny andiany mitovy amin'ny voarindra avy amin'ny fiarahana 1 ka hatramin'ny 12. Ny tsingerin-taona / famokarana barazy / indim-baravarana U dia hamindra ny fizotrany avy amin'ny joint 1 (fotoana ny hafanana ary ny herin'ny hery) amin'ny fiarahamiasa 2 (fotoana ny hafanana ary ny herin'ny%) sns na dia miaraka aza 12. Ny filaharana, niditra indray, dia tokony harahina isaky ny fivoriambe. Izany dia haka ny fahatsiarovan-tena momba ny fahatongavan-tsofina isaky ny fiasana mba hanomezana fiverenan'ny dingana.
Safidy iray hafa handinihana ny fijerena ny safidy HLQ Robotic Arm. Ity safidy ity dia manohana ny induction brazing coils/ trano fonenana sy mihetsika ny fivoriambe rehefa voalamina hametraka ny coil any amin'ny faritra iraisan'ny tsirairay. Ny sandry tohanana dia mihodina ary manetsika ny tranon'ny coil / coil amin'ny toerana sy ny zoro mety ho an'ny tsirairay miara-miantoka ny toeran'ny tany sy ny hafanana.
Sokajy Technologies Tags dingan-drano varahina, milina fitotoana vy, rafitra fandatsahana fantsona varahina, feno fampidiran-keloka mampirongatra, avo varahina fantsona fantson-drano, fantsona varahina avo lenta, fivarotana varahina fantson-drano, fantsom-baravarana varahina fantsona varahina, fantsona varahina kely Post Fikarohana